🥇 ▷ Kuwani waa sawirada la soo bandhigay ee Sony Xperia 2 ee muujinaya oo xaqiijiya muuqaalkooda ✅
Kuwani waa sawirada la soo bandhigay ee Sony Xperia 2 ee muujinaya oo xaqiijiya muuqaalkooda
Sony ma aysan dooneynin inay u dhiibto guuldaradan ka dib markii ay dakhli ka soo saartay dakhli ka mid ah suuqyada ay bartilmaameedku ka badan yahay tan iyo markii ay dhalatay, taas oo ah tan casriga ah. Shirkadda Jabbaan waxay u dhaqaaqday qaybo ka mid ah sidii ay u beddeli lahayd waqtigeeda oo aan ahayn wax la saadaalin karo, iyo furitaanka aalado xiddigeedyadeeda, kuwaas oo kala ah Xperia 10 iyo Xperia 1, calankooda hadda, waxay u fuliyeen inay mar labaad soo jiitaan dareenka Macaamiisha. abuuraan lambarro wanaagsan.
Soo-saaraha, si uu u siiyo awood ficilkii ugu dambeeyay ee uu ku fuliyay si uu ugu laabto wixii uu horay dunida ugu ahaan jiray taleefoonnada casriga ah, wuxuu sidoo kale diyaarinayaa garoon cusub oo heer sare ah oo heer sare ah, kaasoo imaan doona sida Xperia 2. Astaamaha uu taleefankan gacantu ku dhow yahay way xoog badan yihiin, tanina waa wax sidoo kale lagu taageerayo liigitaannadii dhowaa ee aan ka hadlaynay, kaas oo sawirrada dhabta ah ee uu ka leeyahay lagu ammaanayo. Hadda, si loo sii wado firfircoonaanta, Waxaan shaaca ka qaadnaa kuwa wax ka beddelaya tan oo dhowaan soo baxday.
Nasiinnada Sony Xperia 2 ayaa mar kale la soo saaray
Sony Xperia 1 waa moobiil rasmi ka noqday suuqa bishii Febraayo. Tani waxay qaadatay qaab shaxeed oo 21: 9 ah oo shaashad ah iyo astaamo kale iyo tilmaamo sare. Ku-xigeenkiisa, kaas oo ah Xperia 2, ayaa hayn doona golahan caatada ah, in kasta oo dabeecadiisu is beddeli karto, haddana jaantuskeedu wuu ka duwanaan lahaa. Tani waxay taageeri doontaa naqshad la mid ah tii hore looga helay aaladda aan kor ku soo xusnay, sida aad ku arki karto sawirradeeda.
In kasta oo taasi jirto, waad sheegi kartaa taas isbeddello baa keenaya, sida kamarad saddex-geesood ah oo toosan oo taagan oo ku taal geeska bidix ee sare ee daboolka dambe, halkii aad joogi lahayd xarunta sare. Furayaasha jirku waxay noqon doonaan isku mid waxaana si siman loogu dhejin doonaa dhinaca midig iyadoo ay la socdaan akhristaha faraha. Marka laga hadlayo mawduuca sawirka dambe, waxaa la sheegaa inuu ka kooban yahay dareemayaal la mid ah kan ay ka kooban tahay Xperia 1; Hadday sidaas tahay, waxaan noqon doonnaa waxyaabaha soo socda: 12 MP + 12 MP + 12 MP.
Processor-ka u keenaya nolosha ma noqon doono qaab ka hooseeya kuwa loo yaqaan ‘Qualcomm Snapdragon 855’, taas oo ah waxa aan ku aragno qaabka hadda jira. Waxay u badan tahay inay suuqa ku gaarto shaashad yar, sidaa darteed baytarigu u muuqdo mid yar oo go’ay. In kasta oo tilmaamaha lagu yarayn doono waxoogaa qaybaha (sida kuwaan ah), waa in lagu magdhabo qaybaha kale.
Si aad u hesho fikrad dhow oo ah waxa aan ka heli doono calanka xiga ee shirkadda Japan, waa inaan xisaabta ku darsanaa dhamaan tayada ay leedahay tayada 1-aad ee Xperia 1; Kuwaan, waxaan filan karnaa horumar badan. Mobilkani wuxuu la imanayaa shaashad 6.5 inji ah oo ah tan OCD shaashad ah oo leh shaashad sare oo QuadHD + ah 3,840 x 1,644 pixels, taas oo keenaysa inuu gaaro cufnaanta pixel ee 643 dpi isla markaana qaabka 21: 9 loo soo sheegay. Ma adeegsaneyso nooc kasta oo kaamirooyin ah ama nidaamka dib-u-celinta ah ee sawir-qaade selfie. Sidaa darteed, waxay leedahay xoogaa bevels steeps ah, inkasta oo aan dhinacna ahayn. Waxa intaa u dheer oo dhan, Corning Gorilla Glass 6 crystal waxay nolosha ka dhigtaa dusha sare si ay uga ilaaliso xoqidda, finanka iyo noocyada kale ee xadgudubka.
Faahfaahinta cusub ee Sony Xperia 20 waxay u muuqataa taas oo tilmaamaysa inay tahay “Snapdragon 710” oo ay tahay SoC
Marka lagu daro SD855-ka ay leedahay mustaqbalkiisa, taleefanka casriga ah wuxuu la socdaa 6 GB RAM iyo 64 ama 128 GB oo ah meel keydin gudaha ah. Mana aha inaan ilaawin kamaradaha gadaal ee saddex-gees leh, oo, sidaan horeyba u sheegnay, leh seddex 12-megapixel xasaasi ah. Naftayda, nidaamka aqoonsiga wajiga, wicitaanada fiidiyowga iyo wixii intaa ka badan, waxaan haysannaa kamarad 8 MP ah dusha sare.
Dabcan, nidaamka hawlgalka ee Android 9 Pie wuxuu ku shaqeynayaa aaladda, iyo sidoo kale nidaam ku hadla isteerinka, batariga awooda 3,330 mAh oo leh taageero loogu talagalay ku dallajinta deg deg ah ee 18 watts iyo dareemayaal kala duwan iyo xulashooyinka isku xirnaanta horumarsan.